I-Semalt Expert Ithetha ngeyona nto inobungozi kwi-imeyli e-Spammer ehlabathini
Kwinqanaba le nqaku, uJulia Vashneva, umphathi weMatriki oPhumeleleyo we-8 (Semalt weeNkonzo zeDivarti, uya kukuxelela malunga ne-spammer edumileyo kunye neyingozi kwihlabathi-i-spammer yaseRussia, Peter Levashov.
Amagosa aseburhulumenteni ahamba eMoscow kwiminyaka emibini edlulileyo ukucela uncedo lwabahlobo baseRussia. Bafuna ukubamba i-email spammers eyingozi kakhulu kwihlabathi kodwa bahlwaywa. Inkampani yokunyanzelisa umthetho yaseMerika yabatshela malunga nomcimbi. Ugaxekile wasebenzisa i-pseudonym uPeter Sevara kwaye wagcinwa nguRhulumente waseRashiya. Ngaloo ndlela, akukho mntu unokumchaphazela okanye ukumlimaza - gummiband mit 2 haken. Ekugqibeleni, ii-agent zabuyela emva zaze zalinda ukuba iinjongo zabo zenze iimpazamo.
Iindaba ezilungileyo kukuba wenza iphutha waza waya e-Barcelona ngeeholide. Urhulumente waseSpeyin wayemlandela emva kweminyaka, kwaye amagosa asebupoliseni aqhubela kumagumbi ehotele apho le spammer yayihlala kunye nomfazi kunye namanye amalungu entsapho. Wayebanjwe ngelo xesha, kwaye i-Federal Bureau of Investigation igosa le-cybersecurity liye lagqiba ukuphanda le meko. Umntu omubi wayevale iitoni zeekhomputha ngokuzikhukula ngeentsholongwane. Ekugqibeleni, iSebe lezoBulungisa likhupha amaphepha enkundla ekumangalela oku. Igama lakhe loqobo nguPeter Levashov. Utyholwa ngokukhwabanisa nokukhutshwa ngokungekho mthethweni kweengxoxo zombane. UPetros wayekulindelwe ukuba adluliselwe eMelika ukuba enze uphando..
Iziphathamandla zithi wababanjwa kwaye umnatha wakhe uninzi ngakumbi kunanini ngaphambili. Kwiminyaka, le ndoda yayisebenzisa ubukumkani bayo ukuze izuze ngokwenza imisebenzi yobuqhetseba. UMongameli uDonald Trump unethemba lokuba lo mthi-spammer uza kubona ikusasa lakhe kungekudala. Kwixesha elidlulileyo, i-Kremlin yayibambelele ukuboshwa okufanayo kulo lonke ilizwe. Amapolisa aseSpain abambelele ngempumelelo uMnu Levashov; nangaphambi koko, wabanjwa kwelinye ilizwe kodwa wakhululwa ngenxa yokubandakanyeka kukaRhulumente waseRashiya.
Ngoku, ithemba ukuba ezinye i-spammers ezininzi ziya kubanjwa njengoko oorhulumente bathatha amanyathelo angqongqo. Amagosa asebupoliseni kunye nabasebenzi be-cysecurers balandela u-Levashov iminyaka, ukuchaneka ukususela ngo-2006. Kuze kube ngoku, le ndoda yenza izigidigidi zeedola esebenzisa inethiwekhi yabalingane kwaye iye yahlutha amaninzi iikhomputha ngokufaka inkunkuma yakhe ye-malware (Kelihos) kuyo.) U
Iindleko zemikhankaso yogaxekile zisuka kwi $ 300 ukuya kwii-700 zama-imeyili nge-imeyile. Wayebonelela izaphulelo kubaxhasi bakhe, ekubakhokeleni ekunikeni kwakhe kwaye wayefuna ukuba imali yabo. Injongo ephambili kaMnu. Levashov yayimakhompyutha aseMelika. Kuze kube ngoku, akucaci isizathu sokuba wayebeka ubomi bakhe engozini ngokuya kwelinye ilizwe kunye nosapho lwakhe. Nangona kunjalo, abaphandi be-cybersecurity bathi wayezama ukufihla ubungqina bakhe xa esuka eRashiya waya eSpain.
I-FBI ifumene ulwazi lokuba uLevashov washiya ilizwe lakhe kwaye wayeya e-Barcelona ngeeholide. Amapolisa aseMelika athatha inyathelo ngokukhawuleza kwaye wayefuna ukummisa ngokukhawuleza. Ngethuba lo msebenzi, ama-FBI asebenzise amandla anikwe amandla phantsi kwezilungiso kwizinto ezibizwa ngokuba yiNqununu 41 yeMigaqo ye-Federal Criminal Procedure. Kwabavumela ukuba bayeke lo mntu ekutheleleni iikhomputha ezininzi kunye neentsholongwane. Kwaye ngoku, uLevashov uya kuchitha ubomi bakhe bonke entolongweni.